ujyaalo nepal	 ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १७:४५ 0
काठमाडौं । वर्षकै बहुप्रतिक्षित सिनेमा ‘प्रेमगीत ३’को रिलिज मिति घोषणा गरिएको छ । सिनेमा आगामी असोज ७ गतेबाट नेपालभरका सिनेमा घरमा रिलिज हुनेछ । कोरोना महामारीका कारण पटक पटक रिलिज स्थगित भएको सिनेमा अब घोषित मितिमै रिलिज हुने निर्माता…
ujyaalo nepal	 २९ बैशाख २०७९, बिहीबार ०५:४० 0
काठमाडौं । गीतकार अगम विकरालको ‘एकान्तमा’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । दार्जिलिङको मिरिकमा छायाङ्कन भएको भिडियोमा प्रतिमा लिम्बू र मनेन्द्र गोर्खाले अभिनय गरेका छन् । मेलिना राईको स्वर रहेको गीतमा नुहाङ राईको सङ्गीत र फणिन्द्र…
ujyaalo nepal	 २८ बैशाख २०७९, बुधबार ०८:३२ 0
काठमाडौं । चिनियाँ लेखक लाओ माद्वारा लिखित ‘एक असाधारण अन्तर्वार्ता’ कथासङ्ग्रह प्रकाशनमा आएको छ । युयुत्सु आरडी शर्माद्वारा अनुदित सङ्ग्रहमा चीनको बेजिङस्थित रेनमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विश्वप्रसिद्ध कथाकार ‘मा चुन्ची’ का…
ujyaalo nepal	 २६ बैशाख २०७९, सोमबार ०५:०७ 0
काठमाडौं । आगमी असार ३१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म 'सिल्ली फो'को डविङ सकिएको जानकारी निर्माण टिमले दिएको छ । राजबहादुर साने निर्देशित फिल्मको केहीदिन अघि एक पोष्टर सार्वजनिक गर्दै रिलिज मितिको घोषणा गरिएको थियो । सिनेमाको सार्वजनिक…
ujyaalo nepal	 २४ बैशाख २०७९, शनिबार १३:४२ 0
भक्तपुर । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले भक्तपुरको मध्यपुरथिमि राधेराधेमा ‘वान डे थ्री डी आर्ट म्युजियम’ सञ्चालनमा आएको छ । भक्तपुरको राधेराधेमा सञ्चालनमा आएको उक्त म्युजियमको शनिबार वरिष्ठ हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले…
ujyaalo nepal	 २४ बैशाख २०७९, शनिबार १२:१५ 0
काठमाडौँ। चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले आगामी जेठ ७ गते चलचित्र पत्रकारिता दिवस तथा २३ औं वार्षिक उत्सव मनाउने भएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार जेठ ७ गते शुभकामना आदानप्रदान गरि दिवस मनाउने तयारी गरेको हो । यस्तै संघले सोही…
ujyaalo nepal	 २४ बैशाख २०७९, शनिबार १२:११ 0
काठमाडौं । सूर्य एन श्रेष्ठ निर्देशित सिनेमा ‘लाइफ इन एलए’ को गीत रिलिज गरिएको छ । आगामी जेठ ६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने सिनेमाको शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गीत रिलिज गरिएको हो । उदाएर आयो तिमी बोलको गीतमा सिनेमाका मुख्य…
तर चुनाव, अरुकै देशको नेताले जित्छ !!
ujyaalo nepal	 २४ बैशाख २०७९, शनिबार ०३:१३ 0
चुनाव तिनीहरुको देशमा पनि हुन्छ चुनाव मेरो देशमा पनि हुन्छ तिनीहरुको चुनावमा तिनीहरु भोट आफ्नु देशको नेतालाई दिन्छन् चुनाव पनि आफ्नै देशको नेताले जित्छ ! मेरो चुनावमा म पनि, दिन त भोट आफ्नै देशको नेतालाई दिन्छु तर, चुनाव…
‘के घर के डेरा’को सम्पूर्ण छायाँकन काठमाडौं उपत्यकामा हुने
ujyaalo nepal	 २३ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०९:२० 0
काठमाडौं । शुक्रबार दीपेन्द्र के खनाल निर्देशित सिनेमा ’के घर के डेरा’को स्वंयम्भूस्थित हारती माता मन्दिरमा शुभमुहूर्त गरिएको छ । सिनेमाको शुभमुहूर्तसँगै एक दृश्य पनि छायाँकन गरिएको थियो । अहिले शुभमुहूर्त गरिएपनि सिनेमाको नियमित छायाँकन…
ujyaalo nepal	 २२ बैशाख २०७९, बिहीबार ०६:२७ 0
काठमाडौं । गीतकार डीआर उपाध्यायको शब्दमा तयार भएको ‘स्त्री जातैले’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतकार उपाध्यायले वल्र्ड रेकर्डमा विभिन्न कृतिको माध्यमबाट नाम लेखाइसकेका छन् । प्रताप दास र रचना रिमालको स्वरमा समावेश यो गीतमा बाबुल…